Iindaba zesiXhosa, 11:00, 06 eyoMdumba 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 11:00, 06 eyoMdumba 2019
Written by Ashia Nkontsa on 06/02/2019
Wenzekile umonakalo eHout Bay emva koMlilo
Abasemagunyeni kwindawo yotyelelo i-Tintswalo eHout Bay baxakeke kukuphonononga umonakalo kulandela umlilo ogqogqise izolo. Malunga nesiqingatha sale hotele izinze kummandla weChapman’s Peak Drive kumazantsi ePeninsula sitshabalele kulo mlilo. Kusthe kwangqongqa isakhiwo secandelo elingundoqo lale hotele kuquka igumbi lolonwabo,igumbi lokutyela kwakunye nalawo akufutshan neendawo zikawonke-wonke. Igosa eliyintloko uLisa Goosen uthi kuqhutywa uphando lokujonga unobangela walo mlilo nongowesibini omkhulu kule hotele kwinyaka emine
Loka Phakeng akoyikiswa ngokoyikiswa
Nangonanje efumene izigrogriso zokugqithisw’amafu usekela ngqonyela weUnivesithi yaseKapa unkosikazi Mamokgethi Phakeng uthi akasayi kusebenzisa imali ye-UCT ekuqasheni umqhubi kwakunye nonogada. UPhakeng ubhale kwikhasi lakhe lezonxibelelwano ukuba lowo ufumene izigrogriso ezimothusileyo kodwa noko kunjalo akasayi kunkwantyiswa ngumgrogrisi koko makaqhube enze oko afuna ukwenza. Ukanti nangonanje kungekho nkcukacha zingako usomlomo waseUCT umnumzana Elijah Moholola uthi baxhalabile malunga nesi siganeko kwaye basinikezele kwiinkonzo zokhuselo zeli ziko i-CPS khon’ukuze liqhube uphando kwaye sele ekho amanyathelo okhuseleko labasebenzi nabafundi kuquka oonogada abanxibe oomakufanwe abayaluzela kumasango eli ziko-mfundo.
Kulindeleke uMene avele kwinkantolo yaseKapa namhlanje
Kulindeleke ukuba umbutho ongekho phantsi kukarhulumente i-SJC wenze iintshukumo zokubonakalisa ukungaxoli phambi kwenkundla kamantyi yaseKapa namhlanje apho usosiba-jikelele wayo umnumzana Axolile Notywala azakuvela okokuqala kulandela ukubanjwa kwakhe kwiveki ephelileyo. Unotywala ubanjwe kwiziko leenkcukacha i-Civic Centre ngethuba bebambe uqhankqalazo oluzolileyo lokugunyazisa amanzi,amagumbi angasese agungxulwayo nombane kwiindawo zamatyotyombe. Umene lo ubekwe ityala lokuqwabaza umthetho ojongene neendibano zoluntu kwaye emva kokukhululwa kwakhe elugcinweni lamapolisa uxelele iintatheli ukuba amagosa ezomthetho akhulule iziqhushumbisi zokuchitha-chitha abaqhankqalazi abangenabundlobongela, engekhange aqale ngokuthetha nabo. Uthi uthe akubuza oko, wakhonxwa isithuba seeyure ezimbini engabekwanga tyala kananjalo ngethuba ekwiveni yamapolisa ukhe wafikwa kahlanu ngeempama.
uRamaphosa uphoswe amazwi athi uMzantsi Afrika ulilungele ushishino
Uyaqhuba umongameli Ramaposa nokurhwebesha abatyali-zimali esithi ilizwe loMzantsi Afrika liyindawo elungele ushishino. uRamaposa ebethetha kwi-Indaba yezemigodi yelizwekazi i-Afrika ebanjelwe kwiziko lamazwe-ngamazwe laseKapa ebongoza igqiza labathunywa ukuba lingoneli kukutyala imali eMzantsi Afrika kuphela koko kwilizwekazi leAfrika ngokubanzi. Uthi nangonanje eli lizwe lijamelene nemingeni ethile emikhulu kwezoqoqosho lisenawo umtsalane wezoshishino kwaye urhulumente umnaxhaphetshu ezama ukuqubisana nemingeni ethwaxa inkampani yakwa-Eskom nebonakala njengomqobo obangela abatyali-zimali batshitshilize ukushishina kweli lizwe….RAMAPOSA ON ESKOM…Uthi lizakubhengezwa kungentsuku zatywala iqhinga lokuncedisana nale nkampani. Umongameli uthi bakho abatyali-zimali abalisabele ngokukuko ikhwelo lakhe baza nalapho ezinye iinkampani zenze izibophelelo zamakhulu amabini ebhiliyoni zeedola zaseMelika.
iCOSATU izobe indwendwele eli leKapa
Umfelandawonye weemanyano zabasebenzi belizwe loMzantsi Afrika i-Cosatu uzakubamba umngcelele kweli leKapa kanye nje ngosuku oluphambi kwentetho yohlalo-lwabiwo mali yangomhla weshumi elinethoba kule iphezulu. Le yinkxalenye yeetshukumo zoqhankqalazo lukazwelonke ezibhengezwe ngumongameli weCosatu unkosikazi Zingiswa Losi esithi bavakalisa ukuchasana okumandla nokudendwa kwabasebenzi kwakunye nentswela-ngqesho.
Umbutho weDA uthi zonke iincukhacha mazibhentsiswe
Iqela leDA lifuna zidandalaziswe elubala iinkcukacha zezivumelwano zentsebenziswano phakathi kweenkampani ezimbini zikanyana kamongameli Cyril Matamela Ramaposa, umnumzana Andile Ramaposa kunye nenkampani i-African Global Operations eyayisakuba yi-Bosasa. Ngokweengxelo zeDA, usihlalo wale nkampani sele efake isicelo semvume yokupapasha ezi nkcukacha kwinkampani i-Blue Crane neOfftake. Eli qela lithi likholelwa kwelokuba ukufumana kukaRamaposa inkxaso-mali kwiBosasa ngethuba ekhankasela ukuba ngumongameli weANC akuhambisani nemigomo yendlela yokuziphatha nanjengoko kukhabana nokuba nguzimele-geqe. IBosasa sele kuhanjwa kucelwa impunga ngayo ngenxa yezityholo zamanyundululu ezenzo gwenxa kwezezimali ezanekwe kwikomishoni kaZondo.